Pulse Audio Mixer: applet vaovao hifehezana ny habetsaky ny GNOME | Avy amin'ny Linux
Pulse Audio Mixer: applet vaovao hifehezana ny habetsaky ny GNOME
Misaotra ny mponin'i WebUpd8, Hitanay ny momba ny applet Pulse Audio Mixer. Applet kely ho an'ny tontonana GNOME izay ahafahanao mifehy ny habetsaky ny fampiharana misokatra tsirairay. Izy io dia azo ampiasaina ho solon'ny applet volume default ao amin'ny GNOME.
Na dia mbola tsy manana famolavolana polished aza izy io dia mety tena ilaina tokoa. Ankoatry ny fahafahanao mifehy ny habetsaky ny rindranasa tsirairay, ity applet ity dia ahafahanao manova ireo fitaovana I / O ary mamindra ny renirano am-peo isaky ny rindrambaiko amin'ny fitaovana samihafa.
Nivoaka ny kinova 0.2.2 izay manamboatra bug maro ary manampy fanavaozana kely vitsivitsy.
Na azonao atao ny manampy ny PPA mivantana ary mijanona ho havaozina foana:
sudo apt-mahazo mametraka pulseaudio-mixer-applet
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Pulse Audio Mixer: applet vaovao hifehezana ny habetsaky ny GNOME
EasyPeasy 1.6 RC misy: Ubuntu ho an'ny netbook anao
Ahoana no ahalalako fa manohana 64 bit ny fikirakirako?